Barcelona Oo Dalabkii Koowaad Ka Gudbisay Robert Lewandowski & Jawaabta Ay Heleen - GOOL24.NET
Barcelona Oo Dalabkii Koowaad Ka Gudbisay Robert Lewandowski & Jawaabta Ay Heleen
Kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa dalabkii ugu horreeyey ee rasmi ah ka gudbisay weeraryahanka reer Poland ee Robert Lewandowski, hase yeeshee waxa uu noqday dalab ka hooseeya shuruuddii ay Bayern Munich ku xidhay laacibkan.
Robert Lewandowski oo ay da’diisu tahay 33 jir ayaa waxa uu hore ugu sheegay kooxdiisa Munich in uu doonayo inuu ka tago kooxdaas xagaagan, xilli uu sannad ka hadhsan yahay qandaraaskiisa.
Sida ay xaqiijisay warbaahinta ESPN, Barcelona ayaa maanta gudbisay dalab ay gaadhsiisay Bayern Munich oo ay ku doonayaan Lewandowski, hase yeeshee waxay kala kulmeen jawaab aanay ku farxin oo diidmo ah.
Warka ayaa intaa ku daray, in Bayern Munich oo dalbanaysa £34 milyan oo Gini aanu dalabka Barcelona gaadhsiisanyn halkaas oo uu aad uga hooseeyey sidaa daraadeedna uga diideen iyaga oo ku andacoonaya in ay soo buuxiyaan sharciga dhinaca qiimaha.
Agaasimaha ciyaaraha Bayern Munich ee Hasan Salihamidžić oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inay suurtogal tahay in la xalliyo mustaqbalka Robert Lewandowski, laakiin waxa uu ku adkaystay in uu kula jiro qandaraas soconaya illaa 2023 oo ay ka hadhsan yihiin 12 bilood oo kale.
Xidhiidhka u dhexeeya Munich iyo gool-dhaliyaheeda ayaa sii xumaanaya waxayse kooxdaasi u muuqanaysaa inay u diyaar-garowdo nolol uu ka maqan yahay Lewandowski kaddib markii ay toddobaadkan Liverpool kasoo iibsadeen Sadio Mane oo ay kasoo bixiyeen lacag gaadhaysa £35 milyan oo Gini.
Dhinaca kale, PSG ayaa kusoo biirtay tartanka Lewandowski waxaanay diyaar u tahay inay bixiso lacagta ay Bayern Munich dalbanayso, si ay uga hor qaadaan Barcelona.